Subas Niraula – Subas Niraula
आउदो Season 2019/20 मा Lionel Messi द्वारा फूटबलमा बन्ने साथै तोडिने सम्भावना भएका ६ ठुला Record हरु एसप्रकार रहेका छन । यदि यस Season मा Messi ले Barca को लागि 39 Goals गर्न सकेमा महान खेलाडी पेलेको एकै क्लबका लागि सर्बाधिक Goals गर्ने बिसौ सताब्दीको World Record आफ्नो नाम गर्ने Read more…
By Subas Niraula,9months ago July 10, 2019
FC Barcelona 2019/20 Home: The new Blaugrana jersey featuresapattern of large squares in front and back, replacing the current vertical canes . The sleeves remain blue, while the Senyera detail goes to the front of the neck. According to the brand’s statement, the shirt is inspired by “the Read more…
By Subas Niraula,9months ago July 3, 2019
विश्वमा करोडौं स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरु ह्वाट्सएप प्रयोग गर्छन् । धेरै प्रयोगकर्ताहरु लामो समयसम्म एउटै ह्वाट्सएप नम्बर प्रयोग गर्छन् । तर, कहिलेकाहीँ केही कारणले आफ्ना पुरानो ह्वाट्सएप नम्बर परिवर्तन गर्न चाहन्छन् । यसरी नम्बर परिवर्तन गर्दा पुरानो ह्वाट्सएप नम्बरमा रहेका सबै रेकर्ड, च्याट, मेसेज तथा ग्रुपहरु डिलिट हुन्छन् । ह्वाट्सएप नम्बर परिवर्तन Read more…
By Subas Niraula, 1 year ago December 31, 2018
सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै ह्याक भएका वा सर्वाधिक कमजोर पासवर्डको खुलासा भएको छ । वर्षको सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको सूचिमा १२३४५६ सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । १२३४५ सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको पहिलो स्थानमा रहेको यो लगातार पाँचौँ वर्ष हो ।त्यस्तै password शव्द कमजोर पासवर्डको दोश्रो स्थानमा रहेको पनि पाँचौ पटक हो । Read more…
हामीले नयाँ वाइफाइ राउटर किन्दा कहिले पनि शक्तिशाली नेटवर्क सुरक्षाबारे ध्यान दिँदैनौं । खासगरी घरमा जोड्ने राउटर भनेपछि हामी केवल त्यसको स्पिड र कभर गर्ने एरियाका बारेमात्रै ध्यान दिन्छौं ।अब भने हामीले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ । नेटवर्क सुरक्षा शक्तिशाली हुन किन जरुरी छ भने त्यो नै हाम्रो इन्टरनेटमा प्रवेश Read more…